Basikety- “Young coach”: nivoaka ireo tanora nahavita fiofanana - ewa.mg
News - Basikety- “Young coach”: nivoaka ireo tanora nahavita fiofanana
Miisa 41 ireo mpanazatra “young
coach” nahavita fiofanana nokarakairan’ny eo anivon’ny federasiona
malagasy ny basiket-ball sy ny CEBB, nanomboka ny 20 ka hatramin’ny
27 jolay teo tetsy amin’ny ANS Ampefiloha. Lehilahy avokoa ny 39
amin’izy ireo raha toa ka roa ny vehivavy nanatevin-daharana
nanaraka ny fiofanana. Nisy vitsivitsy amin’izy ireo tsy tafavoaka
ho isan’ireo mpanazatra nahavita fiofanana. Etsy ankilany, entina
hanampiana ireo tanora hampitombo ny traikefa ananany sy
hampandrosoana ny lentan’ny basikety malagasy io fanofanana io.
Marihina fa fisantarana fotsiny ihany ity natao teto amin’ny
ligin’Analamanga ity ary hisitrika izany koa ny ligim-paritany
L’article Basikety- “Young coach”: nivoaka ireo tanora nahavita fiofanana a été récupéré chez Newsmada.
Ao anatin’ny faha-160 taon’ny fiangonana: hankalaza ny faha-20 taona ny RFF Amparibe Famonjena
Katroka ny 160 taona, ho an’ny FJKM Amparibe Famonjena. Feno 20 taona amin’ity koa ny nisian’ny sampana Rindra fanatanjahantena sy fialamboly, fantatry ny maro amin’ny anarana RFF Amparibe Famonjena. Jaobily roa sosona, araka izany, ny hankalazain’ny fiangonana mandritra ny 2021. Miavaka amin’ireo sampana maro ao amin’ny FJKM Amparibe Famonjena ny RFF, noho izy fanta-daza eo amin’ny tontolon’ny fiderana an-kira hataon’ny antoko mpihira. Ho fanombohan’izy ireo ny fankalazana, fantatra fa hamoaka rakitsary iray tsy ho ela ny RFF. Hanaraka avy eo ny fampisehoana lehibe, iarahana amin’ireo mpanakanto mpamoron-kira sy mpihira niara-dalana tamin’ny RFF hatramin’izay. Tsy izay ihany fa mikatsaka hikarakara fifaninanana fanatanjahantena ihany koa ny sampana, hanasany ireo fiangonana maromaro. Raha tsiahivina, nanamarika izay 20 taona nodiavin’ny RFF izay ny fitoriana an-kira manerana ireo fiangonana maromaro manerana an’i Madagasikara. Efa nisy koa ny fivoahana, toy ny tatsy Nosy Maorisy. Teo koa ny fandraisana anjara tamin’ny fifaninanana “Raise your voice”, sns. Miara-dalana amin’izany koa ny lafiny fanatanjahantena, indrindra ny taranja volley ball sy basket ball, handraisan’ny RFF anjara hatrany.Zo ny AinaL’article Ao anatin’ny faha-160 taon’ny fiangonana: hankalaza ny faha-20 taona ny RFF Amparibe Famonjena a été récupéré chez Newsmada.
Fandrosoana ho an’i Madagasikara: mila arovana sy velarina ny kolontsaina malagasy
Matetika, “hono”, saropiaro amin’ny kolontsainy ny Malagasy. Antony tsy mampivelatra loatra ny kolontsaina Malagasy, “hono”, izany. Amin’ny lafiny iray, mety ho marina ihany izany noho ny fisian’ireo olona na ampahan’olona tia setrasetra na mpanao amboletra mitady hikitika ilay fototry ny kolontsaina malagasy. Raha io tokoa no mitranga, tsy tokony hifampiandry fa fandraisana andraikitra avy hatrany no takina amin’ny Malagasy tsirairay mba tsy ho lasa lalina ny lesoka vao hifampiantso vonjeo!Fa amin’ny lafiny faharoa kosa anefa, mila fivelarana ny kolontsaina. Tsy azo kobonina loatra izy io mba tsy ho olom-bitsy ihany ny mahalala sy mahafantatra azy. Mety tsy ho tafita ho an’ny taranaka ny kolontsaina raha atao any an-tsikinana foana. Mila ampitaina sy mila zaraina, saingy tsy azo atao gaboraraka satria tsy fomba fanaon’ny Malagasy izany.Mila arahina ny ambaratongam-pahalalana voajanahary. Olon-dehibe, tsy hitantarana angano intsony. Ny voatavotsimifandraka, tsy hotolorana hainteny… Samy kolontsaina malagasy anefa ireo.Ny fahaizana mampifanaraka io fisokafana amin’ny hafa io sy ny fahaizana miaro ny fototra no lalana sy antoka ahafahan’ny kolontsaina malagasy mandray anjara amin’ny fampandrosoana ny isam-batan’olona sy i Madagasikara iray manontolo.HaRy RazafindrakotoL’article Fandrosoana ho an’i Madagasikara: mila arovana sy velarina ny kolontsaina malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Fiverenan’ny fifaninanana :: Ahiana tsy haharaka an’ireo federasiona ny kianja
Azo atao amin’izay ny manazatra tena eny an-kianja na dia mbola voarara aza ny fifaninanana ôfisialy. Efa mihoatra mankany amin’ny fahazoana manatanteraka fifaninanana sahady anefa ireo federasiona isan-tsokajiny satria miroso mankany amin’ny fiverenan’ny fiainana toy ny andavanandro tanteraka isika, saingy tahaka ny akohokely notsipazampotsimbary ihany izy ireo manoloana ny fahavitsian’ny fotodrafitrasam-panatanjahantena misy sy misokatra ho azy ireo. Ireo taranja mampiasa kianja mitafo na ny lapan’ny fanatanjahantena no tena velom-panahiana. Tsy haharaka ireo fotodrafitrasa ireo raha toa ka samy hampiasa izany avokoa ny mpisehatra rehetra. Milaza ny samy hiezaka hamita ny fandaharam-potoanany avokoa mantsy ireo federasiona tsirairay, vantany vao tapitra ny fihibohana. Famitana taom-pilalaovana Efa nilaza ny hanatanteraka ny fifaninanam-pirenena ho an’ny taona 2020, amin’ny volana oktobra (sokajy zandriny lahy sy vavy) sy desambra (sokajy zokiny lahy sy vavy), ohatra, ny Federasiona malagasin’ny handball (FMHB). « Ezahina ny hanaovana ny fifaninanana any amin’ny faritra hafa raha tsy mbola azo ampiasaina ireo kianja eto an-drenivohitra », hoy Razafitsalama Fidèle, filohan’ny FMHB. Nametraka fanamby ihany koa ny Federasiona malagasin’ny taranja volleyball (FMVB) fa tsy hisy ny taona fotsy. « Hojerenay ireo karazana fifaninanana mbola azo atao na hitohy hatramin’ny taona 2021 aza ny fanatanterahana azy », hoy indray Razafinjatovo Honoré, tale teknika ao amin’ny FMVB). Hitoetra ho baraingo ho an’izay mahavita mamandrika mialoha ny fampiasana ny lapan’ny Fanatanjahantena, izay ikambanana amin’ny kolontsaina satria mbola mitoby ao ireo mpiasa manatanteraka ny asa fanamboarana ny kianja Barea. Tsy misy afa-tsy ny kianja mitafon’Ankorondrano izany sisa. Mety tsy hisedra olana kosa ireo taranja lalaovina amina kianja malalaka, toy ny baolina kitra, ny atletisma, baolina lavalava, saingy ny hoenti-manana no tena mampitaraina ireo klioba amin’ny fanohizana ny fifaninanam-pirenena. Miandrandra ny minisiteran’ny Fanatanjahantena sy ny Komity olimpika malagasy ireo atleta rehetra, amin’izay mety ho fanohanana azy ireo hahafahany miatrika ny fiverenana an-kianja. L’article Fiverenan’ny fifaninanana :: Ahiana tsy haharaka an’ireo federasiona ny kianja est apparu en premier sur AoRaha.
Andron’ny manamboninahitra: nanamafy ny famerenan-kasina ny Foloalindahy ny filoha
Nanterin’ny filoha Rajoelina Andry fa tandroka aron’ny vozona, natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary miaro ny fiandrianam-pirenena, ny Foloalindahy. Mba hanjaka hatrany eo anivonareo manamboninahitra ny firahalahiana, ny firaisankina sy ny fifankatiavana ahafahanareo manantanteraka izany adidy masina ankinina aminareo izany, araka ny nambarany. “Tsy hitsahatra ny hanohana sy hanampy ny tafika amin’ny fomba rehetra hamerenana ny hasin’ny Foloalindahy aho”, hoy izy amin’ny maha filoha faratampon’ny Foloalindahy azy. Niara-nankalaza ny andron’ny 12 janoary natokana ho an’ny manamboninahitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika ny tenany ary niarahaba ireo manamboninahitra rehetra manerana ny Nosy koa.Narahin’ny fanatanjahantena sy ny fiarahana misakafo izany ankoatra ny fomba fanao amin’ny fanomezana “gisa” ho an’ny filoham-pirenena.Mandalo fiofanana sy fitsipikaTahaka izany koa ny teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo. Nanome voninahitra koa ny andron’ny manamboninahitra ny Praiminisitra Ntsay Christian. Natolotra ny zandriny indrindra ny fibaikoana sy ny fitarihana ny fotoana, araka ny fomba fanao eo anivon’ny tafika. Nialohavan’ny hazakazaka niarahana amin’ny lehiben’ny governemanta izany. Notsiahiviny tao amin’ny toerana nanaovana ny lanonana: Bataillon de sécurité de la primature – BSP fa miainga avy eo ny fibaikoana ny fiarovana ireo lehiben’ny andrimpanjakana rehetra sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta. “Midika izany fa olona nandalo fiofanana sy miaina amin’ny fitsipika maro isan-karazany, ary manana ny soatoavina malagasy ny manatanteraka ny fiarovana. Andraikitra lehibe eto amin’ny tany sy ny fanjakana ny iantsorohan’izy ireo”, hoy izy.Synèse R. L’article Andron’ny manamboninahitra: nanamafy ny famerenan-kasina ny Foloalindahy ny filoha a été récupéré chez Newsmada.
Major League Soccer: nahatafiditra ny baolina voalohany ho azy Raveloson Rayan
Tsy mitsahatra ny misongadina hatrany ireo mpilalao kitra malagasy any ivelany amin’izao fotoana. Tsy ampy iray volana nifindrana tany Amerika, nahafaty baolina iray sahady niaraka tamin’ny kliobany vaovao i Rayan, omaly…. Nahafaty ny baolina voalohany ho azy niaraka amin’ny ekipany vaovao La Galaxy any Etazonia Raveloson Rayan, omaly. Ny ekipan’ny FC Dallas no nifanandrina tamin’izy ireo ka teo amin’ny minitra faha-17, nanakobana ny haraton’ny mpifanandrina aminy tamin’ny alalan’ny lohany, ity mpilalaon’ny Barea de Madagascar ity. Lalao fanindroany niarahany amin’ny La Galaxy, efa misongadina sahady ny tenany amin’ny maha mpilalao sangany azy mandrafitra ny ekipa. Tompon-toerana avy hatrany izy nandritra io lalao faharoa io ka nahafahany niditra soa aman-tsara tao anatin’ny lalao. Tsy nijanona teo amin’io isa iray io, mbola nahafaty baolina roa ry La Galaxy raha toa ka tokana ny tafiditry ny Dallas. Nivoaka mpandresy tamin’ny isa 3 no ho 1, araka izany, ny ekipan-dry Rayan. Marihina fa vao iray volana monja ny nandrafetan’ity mpilalao malagasy ity ny klioba La Galaxy ary lalao voalohany naha tompon-toerana azy ity nahatafidirany baolina ity. Reharehan’ny Malagasy hatrany ny fisian’ny mpilalao mamiratra tahaka izao, indrindra eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena.Tisferana R.L’article Major League Soccer: nahatafiditra ny baolina voalohany ho azy Raveloson Rayan a été récupéré chez Newsmada.
Vary: nisondrotra 300 Ar/kg ny makalioka, nihena 120 Ar/kg ny vary gasy
Miakatra tsikelikely ny vidim-bary avy eto an-toerana, ankoatra ny vary gasy. Nidina kosa anefa ny any Sambava anisan’ny lafo indrindra hatramin’izay, nahatratra 2 800 Ar/kg tany aloha.Tsy nihetsika firy ny vidim-bary amin’ny ankapobeny eto amin’ny Nosy tamin’ny herinandro farany ny volana jona sy ny fiandohan’ity volana jolay ity. Na izany aza, nisy elanelany be ny fiovaovan’ny vidin’ny vary avy eto an-toerana? araka ny tatitra navoakan’ny Masoivohon’ny vary (ODR) farany teo. Manodidina ny 1 610 Ar/kg ny salambidin’ny vary gasy manerana ny Nosy, nahitana fihenana 119 Ar isaky ny kilao. Mahatratra 1 810 Ar/kg kosa ny makalioka, nahitana fisondrotana 313 Ar/kg. Nisondrotra 41 Ar/kg koa ny tsipala ka lasa 1 632 A//kg.Etsy ankilany, tsy nihetsika fa manodidina ny 1 600 Ar/kg ny vary hafarana avy any ivelany.Nihena -300 Ar ny any SambavaRaha raisina isaky ny tanàn-dehibe, anisan’ny tsy nihetsika ny salambidin’ny vary any Toamasina I, any Mahajanga I, any Tsiroanomandidy. Nahitana fihenany 300 Ar koa ny any Sambava, ny fiandohan’ny jolay teo, anisan’ny lafo indrindra hatramin’izay, lasa 2 500 Ar/kg raha 2 800 Ar ny faran’ny herinandron’ny volana jona.Raha raisina amin’ny taha indray tamin’ny fiandohan’ity volana jolay ity, nisondrotra 11% ny any Betioky Atsimo, + 4% ny salambidiny eto Antananarivo, +2% ny any Antsirabe, +1% ny any Antsohihy.Njaka AndriantefiarinesyL’article Vary: nisondrotra 300 Ar/kg ny makalioka, nihena 120 Ar/kg ny vary gasy a été récupéré chez Newsmada.
Analakely, Tetezan’i Bekiraro: nanao bemidina ny polisy, tratra ireo jiolahy mpanendaka
Saron’ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany voalohany (CSP1) Analakely teny amin’ny faritr’Analakely, ny zoma teo ny jiolahy raindahiny amin’ny fanendahana antsoina hoe i Mahagaga. Tratran’ny CSP4 koa ireo jiolahy mpanendaka eo amin’ny Tetezan’i Bekiraro…Raha ny tatitra nampitain’ny polisy, avy nanendaka zokiolona ity jiolahy fanta-daza amin’ny fanaovana sinto-mahery eny Analakely sy ny manodidina iny, tamin’io fotoana io. Nosintoniny tamin’izany ny vangovango teny an-tanan’ilay ramatoa 67 taona. Nahita izany rangahy vadiny efa 73 taona dia nitazona an’i Mahagaga, saingy noho ny hery tsy mitovy dia tafaporitsaka ilay jiolahy. Niantso vonjy tamin’ireo polisy CSP1 teny amin’ny manodidina izy mivady ka raikitra teo ny fanenjehana ilay olon-dratsy ka tratra teo Andohan’Analakely i Mahagaga.Fa saron’ny polisy CSP4 Isotry koa ny jiolahy miisa efatra tompon’antoka amin’ny fanendahana eny amin’ny manodidina ny tetezan’i Bekiraro. Nisy ny paikady nentin’ny polisy misoroka ny fisiana trangana harom-paosy sy fanendahana eny amin’ireo toerana azo lazaina fa mafana eto an-drenivohitra ireto. Ny zoma lasa teo tamin’ny 3 ora tolakandro, jiolahy efatra indray tratran’ireo polisy manao fanamiana sivily teo amin’ny Tetezan’i Bekiraro. Teo am-panaovana ny asa ratsiny mihitsy ry zalahy no nifanehatra tamin’ny polisy ka tsy afa-nihetsika intsony.Jean ClaudeL’article Analakely, Tetezan’i Bekiraro: nanao bemidina ny polisy, tratra ireo jiolahy mpanendaka a été récupéré chez Newsmada.
Hetsiky ny foibe FJKM
Manomana ny hetsika andiany faharoa amin’ilay « Rodorodo Haona Fi 2019 » izay atao amin’ny 30 sy 31 oktobra ary ny 01 sy 02 novambra ho avy izao ny foibe FJKM, izay atao eny amin’ny tanàna Voara Andohatapenaka. Isany homanina amin’izany ny fanentanana ara-pilazantsara, ny seho an-tsehatra, ny fitilina ireo aretina maro sy ny fampiofanana ary ny famelabelaran-kevitra. Ankoatran’ny tsena sy varotra fampirantiana dia eo ihany koa ny kilalao sy fifaninana samihafa. L’article Hetsiky ny foibe FJKM est apparu en premier sur AoRaha.
Montpellier : Sommet Afrique-France
Le nouveau Sommet Afrique-France se tiendra à Montpellier le 8 octobre prochain avec des centaines de participants. Madagascar n’est pas en reste car il sera représenté par la société civile, la culture et les entreprises. Toujours est-il que ce Sommet va prioriser l’écoute et le dialogue. Il se fixe également comme objectif de revoir le type de relation entre l’Hexagone et le continent africain. Depuis un certain temps, la France multiplie ses contacts avec l’Afrique en vue notamment de revoir sa position et son point de vue envers ce continent. Recueillis par Dominique R. L’article Montpellier : Sommet Afrique-France a été récupéré chez Midi Madagasikara.
“Inner Wheel”: fananganana tsena ho an’ny vehivavy sahirana
Mitsinjo ny vehivavy sahirana ny fikambanana Inner Wheel. Isan’ny ezaka ataony ny hanangana tsena eny Manakambahiny. Iarahan’ny Inner Wheel miara-miombon’antoka amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ny fananganana ity tsena ity, ho hampiasain’ny vehivavy sahirana aman-jatony, ahitana talatalana miisa 80. Hanaram-penitra ny fanatanterahana ny asa, ahitana ny fotodrafitrasa azo ampiasaina amin’ny varotra, ny gorodona vita amin’ny simenitra, ny rindrina sy ny loko, ny kojakoja amin’ny vy, ny tafo, sns. Eo koa ny toeram-pidiovana sy fivoahana manaraka ny fenitra tokony ho izy.Natao ny asabotsy 25 septambra teo ny hetsika fanangonana ny vola hanatanterahana ny asa. Nisy ny fanentanana samihafa, toy ny fampirantiana haingo sy lamaody nasehon’i Jaomatana sy i Tachou, ny lamaodin’ny taona 20 an’ny Margareth Golding nasehon’i Sandra Rose. Nofaranana tamin’ny alim-pandihizana ny fotoana.Njaka A.L’article “Inner Wheel”: fananganana tsena ho an’ny vehivavy sahirana a été récupéré chez Newsmada.
Exécutif : Le PRM à New York, le PM à Tolagnaro
Le PM a dirigé un conseil de gouvernement par visioconférence au camp Flacourt. Les deux chefs de l’Exécutif étaient tous les deux absents de la capitale hier. Le président Andry Rajoelina participe actuellement à la 76ème session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York où il a prononcé hier un discours axé entre autres sur la pandémie de Covid-19 et la question des Îles Eparses. Pour sa part, le Premier ministre Christian Ntsay a dirigé hier par visioconférence un conseil de gouvernement à partir du camp Flacourt à Tolagnaro. Le prochain Conseil des ministres attendra le retour du président de la République qui fera à son tour cap vers le Sud la semaine prochaine pour inaugurer l’unité Nutrisud. R.O L’article Exécutif : Le PRM à New York, le PM à Tolagnaro a été récupéré chez Midi Madagasikara.